Ungawathola kanjani ama-movie wabalingisi bethu abayizintandokazi ezi-2 | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Ama-movie nochungechunge, AmaSelula
Konke esingakwenza ngamadivayisi wethu weselula kuyathakazelisa, ngenxa yenani elikhulu lezicelo eziphakanyiswe ngabathuthukisi bazo; uma une-iPhone noma i-iPad unga wandise ulwazi mayelana nama-movie wakho owathandayo, inqobo nje uma unolwazi olusebenzayo mayelana nabalingisi abaze ukubamba iqhaza kubo.
Phambilini besiphakamise uhlelo oluthokozisayo olusisizile thola ama-movie wethu owathandayo kudivayisi ephathekayo ye-Android, okuthile okwakususelwa kusilinganiso sokuthandwa kwayo, inani lamazwana, uhlobo nezinye izici ezimbalwa ezingeziwe; omunye wabavakashi bethu ubephakamise ithuluzi elengeziwe lokukwazi ukuthola lolu hlobo lolwazi, okuyisizathu esenza ukuthi manje silufune shona kancane kule ndawo yama-movie kodwa usebenzisa amadivayisi weselula we-Apple.
1 Umlingisi oyedwa noma ababili abavela kuma-movie wakho owathandayo
2 Ufuna ama-movie ethu nomlingisi wesibili
Umlingisi oyedwa noma ababili abavela kuma-movie wakho owathandayo
Isicelo esinegama «Leyo Movie Nge»Kuzosisiza ukuthola lamafilimu esingawathatha njengezintandokazi zethu; isebenza kuphela kumadivayisi eselula ane-iOS, okusho ukuthi kufanele uyifake ku-iPhone noma i-iPad. Siphakamisa wena sebenzisa isixhumanisi esilandelayo ukuze usithole, ngoba ngaphakathi kwe-Apple Store, ngokubeka igama kaningi aliboniswa emiphumeleni yalo. Ithuluzi likhululekile ngokuphelele, lokhu kuyinzuzo eyengeziwe okufanele isetshenziswe uma singabathandi nabathandi bobuciko be-7.
Lapho sesikwenzile, sizothola isikrini esingenalutho ngokuphelele, okungasho ukuthi ukufakwa kwehlulekile kepha kunalokho, kufanele usithinte ukuze weqe ewindini elihlukile.
Isithombe esisibeke phezulu sikhombisa okuthathwe okungu-3 esikuthathe kuselula yethu (ikakhulukazi, kwi-iPad); ukuthinta isikrini esibomvu sezitini sizogxumela ewindini lokusesha lapho, kuzodingeka kuphela beka igama lomunye wabalingisi bethu izintandokazi. Ngezinhloso zokubonisa siphakamise ukuthi kufunwe uSandra Bullock. Njengoba nje sibhale igama lakho sizoba nemiphumela embalwa, lapho kufanele sikhethe khona ukubona isithombe sakho esikrinini esikhulu.
Uma sihambisa ngeminwe yethu kulesi sithombe sikaSandra Bullock Amafilimu lapho lo mlingisi odumile abambe iqhaza azokhonjiswa khona; Leli windi elihamba libheke phezulu, lapho kuzoboniswa khona iqhaza lakhe ngalinye kumafilimu ahlukile.
Ufuna ama-movie ethu nomlingisi wesibili
Uma ngaphakathi kwalolu hlu lwamafilimu alingisa uSandra Bullock (esiwasebenzise njengesibonelo esincane kuphela) kungewona athanda thina lapho-ke singakhetha sebenzisa igama lomlingisi wesibili; Ngenhloso yokubonisa sithinte phansi kwesikrini ukuze sifinyelele kusixhumi esibonakalayo sokusesha, lapho sizame ukuthola uKeanu Reeves.
Ngokubeka nje igama lakho lokuqala nabalingisi abambalwa okungenzeka ukuthi banalo lizovela. Uma sikhetha kahle emiphumeleni, isithombe somlingisi sizoya ezansi kwesikrini esikhulu lapho kukhona khona isithombe sikaSandra Bullock; manje besizodingeka kuphela hudulela ohlangothini lwesobunxele kulesi sikrini ngeminwe yethu ukuze amafilimu lapho laba balingisi be-2 babambe iqhaza ndawonye avele.
Isikrini sihamba sibheke phezulu, sibonisa wonke lawo mafilimu esingawakhetha kuwo ngokuwathinta ukuze sibonise imininingwane eningiliziwe kulawa mafilimu.
Yize kuliqiniso ukuthi lolu hlelo lusinikeza ithuba loku bazi okuthe xaxa ngefilimu nabalingisi ababambe iqhaza kuzona, ngeke zisikhombise leyo filimu online, yingakho sishilo ekuqaleni ukuthi lena enye indlela enhle kakhulu enikelwe ikakhulukazi abathandi bama-movie neqembu elithile labalingisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Ungawathola kanjani ama-movie wabalingisi bakho abayizintandokazi ezi-2